Aragti: Rajo Caqabad Wadata
Somaliya waxey soo martay cadaab ay iska kaashadeen koox diimeedyo raba xukun ay xoog ku qabsadaan, hogaamiye dhaqameedyo qabiil raba in qabyaalad wax lagu xukumo, ganacsato burcada oo maalgelinaya shaqsiyaad dowlada uga dhex adeega, wadamada deriska oo raba in siyaasada gudaha ee Soomaaliya ay taladooda yeeshaan, bulshada caalamka oo dooneysa in deeqda Soomaaliya la siiyo inta badan ay dib u boobaan inta yar ee soogaartana ay ku ceebeeyaan madaxda Soomaaliyeed oo laaluush ahaan ay iyagu u geliyaan, xildhibaanadii oo lacagtooda ku soo galay baarlamaanka codkooduna yahay beec, iyo dowlad-goboleedyo raba in caalamka ay dowlada Soomaaliya barbar socdaan.
Shacabka Soomaaliyeed waxey qabaan xanuun iyo murugo kaga timid hogaanxumo dhanka siyaasada, waxeyna ka quusteen iney helaan dowlad tixgelin siisa codka shacabka iyo rabitaankooda. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaa soo gashay hididiilo wanaagsan markii ay UNka go'aamisey in Soomaaliya loo sameeyo dowlad la aqoonsan yahay oo dhameystiran. Waxey ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogto dib ugu soo noqotay rajadii ay u qabeen wadankooda iyo in la helo hogaamiye caadila oo daacada oo Soomalya ka samatabixiya dhibaatadii ka soo gaartey dowlad la'aanta.
Waxaa rumodey in Soomaaliya ay yeelatay hogaamiye cusub, doorashadaas oo soo kordhisey taabagalka dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo madaxbanaan. Shacabku waxey soo dhoweeyeen isbedelka siyaasadeed oo lagu tuuray madaxdii KMG, kuwaas oo abuuray rajabeelka salka ku haysey wadashaqeyn la'aantooda iyo u adeega danaha wadamada deriska. Doorashada hogaanka cusub wuxuu ku yimid hantidiisa iyo naceybka loo qabey madaxdii KMG. Doorashadii lagu soo doortay hogaanka cusub ma ahayn mid ku timid codeyn siyaasadeed iyo tixgelin rabitaanka dadka ama taageero loo hayey fikirka musharaxa guuleystey. Waxaa lagu qiyaasay musharixiinta iibsaday codadka in wadajir ahaan ay ku bixiyeen suuqa cod gadashada lacag lagu qiyaasay 31 million oo Dollar.
Iney hana qaado dowladnimo Soomaaliyeed oo u madaxbanaan ismaamulkeeda waxaa caqabad ku ah siyaasadxumo ka dhalata dhaqanka uu la yimaado hogaamiyaha cusub. Marxalada uu hadda wadanku marayo wuxuu u baahan yahay hogaamiye go'aan adag oo dadkii shacabka soo dhibaateeyey si naxariisdaro ah uga qaban kara, shacabkana u fidinaya daryeel naxariis badan leh. Waxaan shaki lahayn cid kasta oo gacan saar la leh koox dimeed iney kooxdaas hogaanka dalka si dadban ula wareegayaan, go'doona ay gelinayaan hogaamiyaha iyaga oo ay dantoodu tahay helida isbedel bulsho, dhaqaale, iyo siyaasadeed oo u gaara afkaartooda qarsoon.